Ku dar Raadin & Soo Jeedin - Liiska Faylka Fudud
Ku dar Raadin & Pagination
Kordhinta Raadinta & Pagination waxay kudareysaa raadinta iyo shaqeynta jadwalka Faylka Liiska Fudud ee Pro. Waxaa loogu talagalay inay ka dhigto raadinta waxaad u baahan tahay iyo marinka liistada faylasha ee aad u fudud.
Sanduuqa raadinta ayaa ka soo muuqan doona liiska faylkaaga. Raadinta feylku waxay ku saleysnaan kartaa magaca iyo / ama taariikh kala duwan, haddii safka taariikhda la soo bandhigo sida halkan ka muuqata.
Isticmaalka kaararka duurjoogta ayaa sidoo kale la taageeray. Tusaale ahaan: .jp * g wuxuu heli lahaa jpg iyo faylasha jpeg labadaba.
Isku day Raadinta Demo | Iibso Plugin Hada
Xakamaynta Pagination waxay ka muuqan doontaa hoosta liiska, oo lagu daray tirada guud ee faylasha. Waxaad qeexaysaa cabbirka bog-hoosaad kasta oo ka mid ah meelaha ay ka kooban tahay qalabka waaweyn.
Kordhinta waxay ku dartay seddex ikhtiyaar oo cusub bogga Muujinta Muuqaalka…
Kordhiso Raadinta: Muuji ama qari guddinta raadinta
Ku Raadi: Tus Tusmooyinka Raadinta Qoraalka, Taariikhda ama labadaba
Ku Raadi Taariikhda Wax laga Beddelay: Haddii kale ku raadi taariikhda lagu daray liiska.
Awood-siinta Pagination: U diyaari liistada faylka bogagga yar yar
Faylasha halkii bog: Dooro inta faylal ah ee lagu muujiyo boggiiba
8 fikradood oo ku saabsan "Ku dar Raadin & Pagination"
Sebtember 11, 2021 ee 2: 26 AM
Weligaa ma ku dari doontaa raadinta nuxurka faylka kaas oo ah waxa runtii loo baahan yahay - ama ma haysataa xal kale oo lagu baadho waxyaabaha ku jira faylasha ku jira FLP
Sebtember 11, 2021 ee 10: 17 AM
Malaha, maadaama ay tani aad u adkaan doonto in lagu sameeyo server-ka webka, farsamo ahaan iyo waxqabad ahaanba. Waxaan u baahan nahay inaan awoodno inaan akhrino waxa ku jira faylasha, ka dibna ku kaydi kaydinta xogta si loo baadho. Akhrinta faylasha qoraalka ku salaysan waa sahlan tahay, laakiin PDF -yada way adag yihiin oo noocyada kale ee faylka gaarka ah, sida dokumeentiyada MS Office, ayaa laga yaabaa inaan la akhrin karin haba yaraatee. Laakiin xitaa haddii aan akhrin karno dhammaan waxyaabaha ku jira faylka keydka xogta, fayl kasta wuxuu u baahan doonaa in dib loogu akhriyo fayl kasta dib-u-baaristiisa si loo hubiyo in nuxurku sax yahay. Tani waxay qaadan doontaa waqti dheer waxayna u baahan tahay xusuus badan. Waxaan ka shakisanahay inta badan xisaabaadka martigelinta la wadaago inay wax ka qaban karaan.
Waxaan ku talin lahaa in la adeegsado goobta sharaxaadda si loo kaydiyo ereyada muhiimka ah ee ay adeegsadayaashu raadin lahaayeen. Sharaxaadyadu waa qayb ka mid ah raadinta.
Abriil 16, 2021 at 2: 59 AM
Suurtagal ma tahay in lagu daro qaybta ka dibna la eego qayb kasta?
Abriil 16, 2021 at 11: 04 AM
Maya, laakiin waxaad u isticmaali kartaa fayl si aad ugu kala soocdo faylasha, ka dibna isticmaal raadinta si aad u hesho kuwaas. Si kastaba ha noqotee, Liiska Fudud ee Fudud ma isticmaalo qaybaha boostada WordPress.
Maarso 10, 2021 at 2: 55 AM
Aniga oo adeegsanaya hawsha baaritaanka kama baadhi karo sharaxaada faylka, sax? Tani wax weyn ayey tari laheyd. Ma qorsheyneysaa inaad ku darto shaqadan oo kale?
Maarso 10, 2021 at 10: 10 AM
Haa, sharraxaaddu waa qayb ka mid ah raadinta.
Sebtember 16, 2020 ee 2: 30 AM
Sida aan ugu beddeli karo ballaca tiirarka iyo asalka midabka sadarka koowaad
Sebtember 16, 2020 ee 10: 36 AM